Little Kong Oriọna - Imewe Mmewe
Oriọna Little Kong bụ usoro dị iche iche nke oriọna gbara okirikiri nke nwere teknụzụ nke mgbanaka. Nchọpụta ndị dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ na-elebara mmekọrịta dị n'etiti mebere anya na nke zuru oke na nke efu. Ichebe ndị ikansi na LED n'ime mkpanaka ígwè ọ bụghị naanị na-eme ka ihe mkpuchi ọkụ ghara ịdị ọcha kama ọ na-emekwa ka ọdịiche dị n'etiti Kong na ọkụ ndị ọzọ. Ndị na-ese ihe chọpụtara ọrụ a na-ahụkarị ka ọ mechara ihe karịrị ugboro iri atọ iji gosipụta ọkụ ahụ na udiri ederede dị iche iche n'ụzọ zuru oke, nke na-enyere ahụmịhe ọkụ dị ịtụnanya. Ntọala ahụ na-akwado ịkwụ ụgwọ ikuku na-enweghị ikuku ma nwee ọdụ ụgbọ USB. Enwere ike ịgbanye ma ọ bụ gbanyụọ ya naanị site na ịmị aka.
Aha oru ngo : Little Kong, Aha ndị na-emepụta ya : Guogang Peng, Aha onye ahịa : RUI Design & Above Lights .
Oriọna Guogang Peng Little Kong